[Wondershare] Data Recovery - Nchekwa na pụrụ ịdabere na Data Recovery Solutions
Flash Draịvụ Recovery
Draịvụ Data Recovery
Kaadị ebe nchekwa Data Recovery
Egweri biini Iweghachite
SD Kaadị Data Recovery
MS Okwu Mmezi
MS Excel Mmezi
MS PowerPoint Mmezi
Email Mmezi & Recovery
Data Recovery maka Mac
Data Recovery maka Windows
Ehichapụ faịlụ Recovery
Your Safe & pụrụ ịdabere na Data Recovery Software
Ọgụgụ naanị, Egwu-free na-eri-irè Data Recovery software maka Computers, ike draịva, Flash draịva, Memory Cards, Mobile ekwentị mkpanaaka na, ese foto na Camcorders
Bilie gị Data Back Now!
"Wondershare Data Recovery ... na-enye a ton nke nhọrọ maka otú naghachi faịlụ na ihe ụdị ịchọ, otú i nwere ike streamline na usoro na-enweta ihe ị na-achọ ngwa ngwa"
Si CNET, a na-eduga tech media
Anyị Nwere 5,000,000+ Data Recovery
Software Ọrụ Now!
All ụdị nchekwa ngwaọrụ na faịlụ usoro NTFS, FAT16, FAT32 ma ọ bụ exFAT na-akwado.
Computer & laptọọpụ (Recyle Bin gụnyere)
Floppy Njìàrụọrụ , Zip Njìàrụọrụ, iPod (Nano, Classic & ịkpọgharịa) , Cell ekwentị mkpanaaka na : Black Berry , Nokia , A gam akporo ekwentị ... na-na-akwado
ZIP, rar, nọdụ, na ndị ọzọ bara uru data.
All Data Loss Ọnọdụ akwado
Inaccessibility ma ọ bụ nke ndu
Na-atụghị anya ike anya
Ezighị ezi nkebi ma ọ bụ nkebi njehie
Factory nrụpụta enweghị ndabere
Reinstalled windo ma ọ bụ usoro ike disk okuku
Mac OS X 10.13 (High Sierra), 10.12 (Sierra), 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10,8, 10.7, ma ọ bụ 10.6
Ike Njìàrụọrụ Space:
100 MB na n'elu free ohere
100% Nchekwa na Kacha Data Recovery Software
Wondershare Data Recovery, a enem irè data mgbake software, weere gị furu efu videos, photos, music, akwụkwọ, ozi ịntanetị, wdg si gị PC si ike mbanye ka si USB draịva, mpụga ike draịva, na ndị ọzọ na nchekwa ngwaọrụ
Ịhụchalụ niile faịlụ na software okụt na-ahọrọ ndị nke ị chọrọ iji naghachi.
Miri n'ime Data
Rụọ ọrụ Deep iṅomi ẹkedori a ọma search of gị disk.
Naghachi Files Easily
Weghachite gị furu efu ma ọ bụ ehichapụ faịlụ site na gị PC ma ọ bụ nchekwa na ngwaọrụ na mfe nzọụkwụ.
Naghachi Data na niile iche nke na kọmputa, ike mbanye, flash mbanye ... na ndị ọzọ
Lelee tech nkọwapụta
Ike iṅomi ọrụ enyere gị aka inweta bụla byte gị nchekwa na ngwaọrụ na ala na elu file-nnaputa algọridim-enye gị ohere iji weghachi ehichapụ, Ị ma ọ bụ ọbụna mebiri emebi faịlụ n'ime nkeji.
" " Wondershare Data Recovery bụ mara oru oma mpempe software, mgbe ọ na-abịa na-agbake na-ehichapụ ma ọ bụ furu efu ihe. The omume oge dị mma, ndị interface bụ kensinammuo na anyị ule ekpugheghị ọ bụla njehie ma ọ bụ mkpọka.
Professional na pụrụ ịdabere na
3 modul na-akpan mere maka dị iche iche data ọnwụ ndapụta. Doppler results ike-azọpụta ma na dị ka programm na-amalite faịlụ mgbake ọ bụla.
" " Wondershare Data Recovery bụ a ezi nhọrọ mgbe ị na Etufuru mkpa faịlụ na chọrọ na-azụ ihe dị ka ekwe omume. Ọ na-enye ezigbo set nke ngwaọrụ nke na-achọta faịlụ, na ya na-enyocha kwa na-agba ọsọ were were na rụọ ọrụ nke ọma.
Nanị Maka All Ihe, No Tech choro
Computer jiri? Mkpa Files ehichapụ? Ezighị Ị? Ọ dịghị mkpa ka egwu Now!
Data ọnwụ maka ihichapụ ma ọ bụ formatting nkebi ezighị? Naghachi data echekwara na partitions na anọwo na-ehichapụ ma ọ bụ haziri, na ọbụna site na furu efu ma ọ bụ na-ezo partitions.
Naghachi data maka mmadụ na mberede ihichapụ partitions, formatting disk / partitions, ma ọ bụ site na mebiri emebi ma ọ bụ zoro ezo partitions.
Nkebi ọnwụ n'ihi repartition, buut njikwa, na-ezighị ezi mmepụta oyiri, usoro weghachi, disk mberede wdg
Data ọnwụ n'ihi disk nkebi okuku na virus agha na ike mbanye, na usoro okuku ma ọ bụ Windows wụnye.
Ehichapụ File Recovery
Na mberede ehichapụ dị mkpa faịlụ enweghị ihe ọ bụla nkwado ndabere na mpaghara efu na "egweri Bin"? Naghachi ehichapụ faịlụ site na PC / laptọọpụ / Server na ndị ọzọ na nchekwa media mfe na ngwa ngwa.
Mberede ihichapụ faịlụ site na nri-ịpị menu ma ọ bụ na ịpị 'Hichapụ'.
File ọnwụ n'ihi to'Shift + Del 'enweghị ndabere.
File ọnwụ n'ihi nsị egweri Bin.
Raw Draịvụ Recovery
Weghachi keerughi, zoro ezo ma ọ bụ idiọk imebi data na a na-emekarị mere site faịlụ usoro mmebi, Raw ike mbanye, Raw nkebi ma ọ bụ nkebi ọnwụ na nke a dị ike data mgbake software.
Raw nkebi ma ọ bụ disk na-egosiputa dị ka Raw ma ọ bụ 'Media / mbanye na-adịghị Ị, ga-amasị gị usoro ugbu a?'
Oké mmebi nke na-atụghị anya ike na-apụ, software okuku, ịgbanyụ nchekwa media n'oge na-ede usoro, na-ekwesịghị ekwesị Anam Udeme si SD kaadị.
Ọzọ ndapụta gụnyere ngwaọrụ initialization, virus wakporo, Memory / SD kaadị. 'Access Idebanye' ma ọ bụ ike ịgụ, media kaadị njehie, factory ọnọdụ nke ngwaọrụ enweghị ndabere wdg
Ngwa ngwa na Easily weghachite All Lost Files
Ẹkedori data mgbake software na họrọ ụdị nke faịlụ na ị chọrọ iji weghachi.
Iṅomi Your Device / Kọmputa: Họrọ ụzọ / ebe ebe data ọnwụ mere, na Pịa "Next" ịnọgide.
Nhọrọ Recovery: Preview, Dịghachi na Save Files.
The kasị mma data mgbake software @affordable price ... naghachi 70 GB data dị nnọọ 3 aka elekere ... thanx ikenye na Wondershare Data Recovery 4.8.3!
site Arun Bhave, Nashik, India
Nke a nyeere m aka naghachi n'ezie mkpa ndetu na a free ikpe! i gbalịrị na otú ahụ nwere ike ebe na nke a dị nnọọ nyeere m aka Sọl ukwuu! Daalụ!
Nke a software ike naghachi m data si m na gam akporo ekwentị na att store ikpedịghe !! The data diski kpatara corupt na a software zọpụta ụbọchị 3000+ ụmụ ụmụ foto!
site Michael Potter
The Best na Complete Recovery Software maka Computer & Nchekwa Devices
Olee otú Dịghachi-ehichapụ faịlụ site na egweri Bin
Ụzọ abụọ Dịghachi PowerPoint Files Easily
Olee otú Dịghachi Data si SATA Draịvụ
Olee otú Dịghachi Lost Data si NTFS Draịvụ
Olee otú Dịghachi Data si WD Ike Njìàrụọrụ
Ị Files Recovery
Olee otú Dịghachi ehichapụ ozi ịntanetị
Olee otú Dịghachi-ehichapụ faịlụ site na a USB mbanye
• M nwere ike naghachi faịlụ ehichapụ a ogologo oge gara aga?
Ee, ị nwere ike naghachi gị ehichapụ data n'agbanyeghị nke oge dị ka ogologo dị ka ihe mbụ furu efu data bụghị e overwritten site ọhụrụ data.
• Gịnị ka m ga-esi na free ikpe nke Wondershare Data Recovery?
The ikpe version nwere niile atụmatụ nke zuru version, ma ngụkọta size nke recoverable faịlụ na-capped na 300MB (Windows Version). E nweghị ịgba maka full version.
Ị nwere ike n'ihu na ikpe version site na ịpị "Free Trial".
E nweghị ndị dị otú ahụ na-agaghị emeli na full version. Mgbe ị na-azụta na aha na software, ị ga-kpọghee ekwt ya zuru version, nke na-adịghị ihe ọ bụla na-agaghị emeli.
Ị na-eleta datarecovery.wondershare.com site n'èzí US?
Gaa na gị na mpaghara saịtị n'ihi na ihe mkpa ịnye ọnụahịa, n'ọkwá na ihe omume.
Gbanwee: Chinese English
Egweri Bin Recovery